Ɔde kɔmaa Efesofo 4:1-32
Kristo nipadua yɛ nipadua baako (1-16)
Ɔde nnipa yɛɛ akyɛde (8)
Suban dedaw ne suban foforo (17-32)
4 Enti me a Awurade nti meda afiase+ no, mesrɛ mo sɛ mommɔ mo bra sɛnea ɛbɛyɛ a frɛ a wɔafrɛ mo no bɛfata mo.+ 2 Momfa ahobrɛase*+ nyinaa ne odwo ne abotare+ mmɔ mo bra, na obiara ne ne yɔnko ntena wɔ ɔdɔ+ mu, 3 na monyere mo ho denneennen nkura baakoyɛ a honhom no ama moanya no mu, na montena asomdwoe a aka mo abom no mu.+ 4 Nipadua baako na ɛwɔ hɔ+ ne honhom baako,+ sɛnea wɔafrɛ mo ama moabenya anidaso baako no;+ 5 yɛwɔ Awurade baako,+ gyidi baako, asubɔ baako, 6 Onyankopɔn baako a ɔyɛ yɛn nyinaa Agya; ɔno na odi obiara so, otumi de obiara yɛ adwuma, na ne tumi yɛ adwuma wɔ obiara mu. 7 Afei yɛn nyinaa anya Onyankopɔn adom, na egyina sɛnea Kristo asusuw akyɛde no de ama yɛn mu biara+ so. 8 Enti Kyerɛwsɛm no ka sɛ: “Bere a ɔforo kɔɔ ɔsoro no, ɔde nkoa kɔe; ɔde nnipa yɛɛ akyɛde+ maa asafo no.” 9 Sɛ ɛka sɛ ‘ɔforo kɔe’ a, ɛkyerɛ dɛn? Nea ɛkyerɛ ara ne sɛ osian baa fam nso, kyerɛ sɛ, asaase so. 10 Nea osianee no, ɔno ara nso na ɔforo kɔɔ+ baabi a ɛkorɔn kyɛn ɔsoro+ nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma nneɛma nyinaa adi mũ. 11 Na wayɛ ebinom asomafo,+ ebinom adiyifo,+ ebinom asɛmpakafo,+ ebinom ahwɛfo* ne akyerɛkyerɛfo,+ 12 sɛnea ɛbɛyɛ a wobesiesie* akronkronfo ama ɔsom adwuma no, na wɔde ahyɛ Kristo nipadua no den,*+ 13 akosi sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ baako wɔ gyidi ne Onyankopɔn Ba no ho nokware nimdeɛ mu, ayɛ ɔbarima mua,+ na yɛadi mu sɛ Kristo pɛpɛɛpɛ. 14 Enti mommma yɛnnkɔ so nnyɛ sɛ nkokoaa a nkyerɛkyerɛ* biara+ wosow wɔn biribiri te sɛ asorɔkye de wɔn di akɔneaba no; wɔn na wɔma nnipa de nnaadaa ne adɛfɛdɛfɛsɛm to wɔn brada. 15 Mmom momma yɛnka nokware na yennya ɔdɔ. Ɛba saa a yebenyin wɔ nneɛma nyinaa mu, na yɛayɛ sɛ Kristo a ɔne nipadua no ti+ no. 16 Ɛnam no so na nipadua kwaa biara yɛ nea ehia sɛnea ɛbɛyɛ a nipadua no nyinaa+ bɛkeka asi ani pɛpɛɛpɛ, na ayɛ adwuma abom. Sɛ kwaa biara yɛ n’adwuma yiye a, ɛma nipadua no nyin, na ɛyɛ den wɔ ɔdɔ mu.+ 17 Enti nea meka na midi ho adanse wɔ Awurade mu ne sɛ, ɛnsɛ sɛ mokɔ so nantew sɛnea amanaman no nantew+ wɔn adwenhunu* mu+ no bio. 18 Wɔn adwene aduru sum, na wɔatwe wɔn ho afi nkwa a Onyankopɔn de ma no ho, efisɛ wonni nimdeɛ na wɔn koma apirim. 19 Esiane sɛ wɔn ahonim* awu nti, wɔde wɔn ho maa ahohwibra*+ na wodii wɔn akɔnnɔ akyi,* na wɔde wɔn ho hyɛɛ ɔbra fĩ* nyinaa bi mu. 20 Nanso mo de, moansua sɛ saa na Kristo te, 21 efisɛ ampa ara motee ne nsɛm, na wɔnam no so kyerɛkyerɛɛ mo sɛnea nokware a ɛwɔ Yesu mu no te. 22 Wɔkyerɛɛ mo sɛ munyi suban dedaw no ngu;+ suban a kan na mowɔ mu a nnaadaa akɔnnɔ resɛe no+ no. 23 Na momma wɔnkɔ so nyɛ mo adwene* foforo,+ 24 na monhyɛ suban foforo+ a Onyankopɔn bɔɔ no sɛnea ɔpɛ no; suban a egyina trenee ne nokwaredi a edi mũ so no. 25 Enti afei a moayi nkontompo agu yi, mo mu biara nka nokware nkyerɛ ne yɔnko,+ efisɛ yɛn nyinaa yɛ akwaa a ɛbom yɛ nipadua baako.+ 26 Mo bo mfuw, nanso monnyɛ bɔne;+ mommma abufuw no nntena hɔ nnkosi sɛ owia bɛtɔ;+ 27 mommma Ɔbonsam kwan.+ 28 Mma ɔkorɔmfo nnwia ade bio, na mmom ɔnyɛ adwumaden, na ɔmfa ne nsa nyɛ adwuma pa.+ Ɛno bɛma wanya biribi ama nea ahia no.+ 29 Mommma asɛm a aporɔw mmpue mmfi mo anom,+ na mmom monka nsɛm a ɛfata na ɛhyɛ nkurɔfo den. Ɛno bɛma wɔn a wotie no anya so mfaso.+ 30 Bio nso, monnhow Onyankopɔn honhom kronkron no werɛ;+ ɛno na wɔde ahyɛ mo nsow+ ama da a wɔnam agyede so begye mo no.+ 31 Munyi eyinom nyinaa mfi mo mu: ɔtan biara,+ abufuw, koko bɔne, nkekawmu, abususɛm,+ ne biribiara a enye.+ 32 Mmom no, obiara nna ayamye adi nkyerɛ ne yɔnko, nnya ayamhyehye+ mma ne yɔnko, na munyi mo yam mfa mo yɔnko bɔne nkyɛ no, sɛnea Onyankopɔn nam Kristo so yii ne yam de mo bɔne kyɛɛ mo+ no.
^ Anaa “nguanhwɛfo.”
^ Anaa “wɔbɛtete.”
^ Anaa “wɔde asi Kristo nipadua no.”
^ Anaa “nkyerɛkyerɛ mframa.”
^ Anaa “adwene a ennim hwee.”
^ Anaa “wɔkɔɔ so de anibere.”
^ Anaa “tumi a ɛkanyan mo adwene.” Nt., “mo adwene honhom.”